Brushless DC motor များ - reducers, worm reducers, worm gearboxes, planetetary gearboxes, speed reducers, variators, helical gear, sprial bevel ဂီယာ၊ စိုက်ပျိုးရေးဂီယာအုံ၊ ထွန်စက်ဂီယာ၊ ထရပ်ကားဂီယာ၊
Brushless DC မော်တာများ
ပင်မစာမျက်နှာ / စက် / Brushless DC မော်တာများ
Ever-Power Brushless DC မော်တာများ
TYWZ DC Brushless Motor သည်ရှားပါးဒြပ်စင်ဖြစ်သောပစ္စည်းများကို၎င်း၏ rotor ပစ္စည်းအဖြစ်ယူကာကာဗွန်ဖြူအသွားအလာကိုတည်နေရာအာရုံခံကိရိယာဖြင့်အစားထိုးပါ။ ၎င်းသည်ရိုးရာ DC မော်တာမှပိုင်ဆိုင်သည့်အားသာချက်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရှုပ်ထွေးသောကာဗွန်ဖြီးနှင့်စလစ်ကွင်းကဲ့သို့သောအားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားကာမြင့်မားသောအမှားနှုန်းများကိုကျော်လွှားခဲ့သည်။
ဌအလွန်ကောင်းမွန်သော torque စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော torque၊
ဌသေးငယ်တဲ့ရဟတ် Rotate Inertia, လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း;
ဌအရွယ်အစားသေးငယ်။ ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ ကြီးမားသောစွမ်းအားအချိုး (ပမာဏနှင့်ပမာဏ၏အချိုးအစား)၊
ဌမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စွမ်းအင်နှင့်ကာဗွန်ဖြီး၊ စလစ်ကွင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာသောပစ္စည်းအကြားပွတ်တိုက်စက်များမပါ ၀ င်ခြင်း၊
l ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ ဆူညံသံနိမ့်ကျခြင်း၊
l ရေဒီယိုကိုအနှောင့်အယှက်မရှိ၊ လျှပ်စစ်ဖြီးပွတ်တိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လျှပ်စစ်မီးပွားများမရှိခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ပေါက်ကွဲနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသောနေရာ၊ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေဆိုးရွားခြင်း၊
TYPE Volt ။ (၅) ပါဝါ (kW) မြန်နှုန်း RPM CURR ။ (က) ထိ။ η (%) COSθ Protec ။ အဆင့် အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
TYWZ-18-63 DC220 0.18 3000 1.1 90 0.91 IP54 သို့မဟုတ် IP55
mounting အခြေစိုက်စခန်း ထမ်းဘိုး mounting Dimension ယေဘုယျအားရှုထောင်
112 4, 6, 8 190 95 140 89 38 80 10 33 112 12 230 ၇? ၂၀ 300 460
160 4, 6, 8 254 127 254 121 48 110 14 42.5 160 15 320 ၇? ၂၀ 420 680
180 4, 6, 8 279 140 279 133 55 110 16 49 180 19 355 ၇? ၂၀ 460 750
မှတ်ချက်： motor သည် 4kw ထက်နည်းသောမော်တာ၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်
4kw မော်တာ၏အရွယ်အစား L သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 470 ဖြစ်ပါတယ်။
Frame အရွယ်အစား ထမ်းဘိုး mounting Dimension ယေဘုယျအားရှုထောင်
D E F G M N P S T အနားကွပ်များ AC HF L
71 4,619 40615.5 130 110 ၇? ၂၀ 10 3.54၇? ၂၀ 165 350
80 4, 6, 8 24 50 8 20 165 130 ၇? ၂၀ 12 3.54၇? ၂၀ 176 ※395
112 4, 6, 8 38 80 10 33 215 180 ၇? ၂၀ 1544 ၇? ၂၀ 245 390
132 4, 6, 8 42 110 12 37 265 230 ၇? ၂၀ 1544 ၇? ၂၀ 290 630
160 4, 6, 8 48 110 14 42.5 300 250 ၇? ၂၀ 1954 ၇? ၂၀ 340 680
180 4, 6, 8 55 110 16 49 300 250 ၇? ၂၀ 1954 ၇? ၂၀ 400 750